Shuruudaha Isticmaalka | Institute for Learning and Brain Sciences (I-LABS)
Isticmaalaha waxa la siiyaa oggolaanshaha, bilaashka ah, si uu u helo cutubka tababarka onlaynka ah, oo waxaad aqbashaa in aanad naqilin, wax ka beddelin, soo dejisan, daabicin, qaybin, cid kale ruqsad u siin, ama iibin nuqullo la’aanta oggolaansho qoran.
Isticmaalaha, isagoo isdiiwaangelinaya, sidoo kale waxaa la siiyaa oggolaanshaha inuusoo dejisto khayraadka cutubka, oo bilaash ah, oo aad aqbashaa in aanad wax ka beddelin, daabicin, cid kale ruqsad u siin, ama iibin nuqulada la’aanta oggolaansho qoran.
Had iyo jeer waa inaad u bixisaa sheegista xigashada Websaydka daabcad ama soo bandhig kasta sida soo socota: Cutubyada Gaadhista oo ay samaysay “Institute for Learning & Brain Sciences” (I-LABS) ee Jaamacadda Washington.
Dhammaan macluumaadka, iyaddoo haddii kale la sheego mooyaane waa Xuquuqda Daabacaadda ee Jaamacadda Washington. Dhammaan Xuquuqaha Way Dhowrsan Yihiin.
Wixii su’aalo ah ee ku saabsan isticmaalka macluumaadka ee shuruudaha kale nagala soo xidhiidh ilabsout@uw.edu.